Sida loo badalo Battery ah iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
IPhone ka bedeli batariga ee Apple dukaamada tafaariiqda ama bixiyaha adeegga idman
Apple kaa qaadi doonaa si ay u badasho batariyada aad telefoonka ee haddii uu ka yar yahay damaanad. Haddii aad dooratay saarka AppleCare si loo sugo telefoonka, waxaad eegi kartaa faahfaahin caymiska dukaamada waaweyn ee ay galaan tiro taxan telefoonka ee website Apple ee.
Haddii aad telefoon aan hoos damaanad, in aad sidoo kale booqan kartaa Apple ee dukaanka tafaariiqda si aad u hesho batari bedelka, ama kor u codsado adeegga internetka Apple ee ah. Haddii aanu jirin Apple dukaanka tafaariiqda dhow, aad sidoo kale dooran kartaa Apple oggolaaday bixiyaha adeegga ama Geerashyada xisbiga saddexaad si aad u hesho batari aad telefoonka ee lagu bedelay.
Farsamayaqaano ka fulin doonaan imtixaan aad batteriga si loo hubiyo in batteriga taleefanka ayaa u baahan badalka ama haddii ay jirto wax dhibaato ah oo kale oo telefoonka la dheecaan ka batteriga.
Ka hor aad gudbisay telefoonka bedelka batari, waxaa lagu talinayaa in la abuuro gurmad (hagaagsan aad iPhone) ee content telefoonka ee. Farsamayaqaano ka dib waxaa laga yaabaa in aad telefoon inta lagu jiro beddelka beytariga.
Apple soo eedeeyo $ 79 for batari bedelka, iyo tan weli isku mid u ah dhamaan noocyada baytariyada iPhone. Haddii aad online dalban internetka ee Apple, waxay noqon lahayd inaad bixiso kharash maraakiibta OF $ 6.95, oo lagu daray cashuur.
Bedelaadda batteriga oo aan u baahnayn aqoonta ku saabsan sayniska gantaal, laakiin waa in aad kaliya waxa la sameeyo hadii aad xamaasad leh oo ku filan. Hubi in aad leedahay raad raac u content phone oo dhan ee.
Qaybta 1. Sidee u badasho batariyada iPhone 6 iyo iPhone 6 daray ee
Sidii hore loo soo xusay, isaga oo baddalaya iPhone ee batteriga oo aan u baahnayn aqoonta ku saabsan sayniska gantaal, laakiin waa in aad leedahay waayo-aragnimo ka hor qaar ka mid ah ee uu bedelay bateriga telefoonka.
In howlgalka bedelka batari, waxaad u baahan tahay shan dhibcood kaashawiito pentalobe, sucker yar si jiid shaashadda, qalab pry qaado caag yar, timo engejiye, xabagta qaar ka mid ah, iyo ugu muhiimsan, iPhone 6 beddelka beytariga.
Habka uu u bedelo iPhone 6 iyo batari iPhone 6 daray ee waa isku mid xitaa haddii baytariyada waxaa ka mid ah tirada kala duwan.
Marka hore, furmaan telefoonka. Fiiri u dhow dekedda Hillaac telefoonka ee, waxaad arki lahayd laba boolal yar. Iyaga deedna iyadoo la kaashanayo kaashawiito pentalobe.
Hadda qaybta ugu xasaasi ah, meel sucker u dhow telefoonka ee button guriga, qaban kiiska telefoonka ee aad gacanta iyo si tartiib ah u soo jiid shaashada la sucker ah.
Marka uu bilaabanayo furitaanka, geliso qalabka pry caag ah ee bannaan oo u dhaxeeya screen iyo kiiska telefoonka ee. Si tartiib ah kor u shaashadda, laakiin hubi in aadan aad u qaadin wax ka badan 90 darajo ku-si looga fogaado fiilooyinka bandhigay waxyeello.
Saar boolal ka screen qayb korto, waxyar (muuqdey) xirayaasha screen, oo markaas ka qaad isku xira batteriga by beddeshey laba boolal in ay qabtaan.
Batari wuxuu ku dheggan yahay kiiska telefoonka ee la (strips xabagta in iPhone 6 lagu daray) xabagta, si afuufi timo engejiye yaala gadaasha dambe ee kiiska telefoonka ee. Marka aad dareento in xabagta ayaa u jilcincy, si tartiib ah iyadoo la kaashanayo qalab pry caag ka saari batteriga.
Markaas, ugu dambeyntii, ku soo lifaaq batari cusub in kiiska la xabagta ama cajalad double-dhinac. Ku lifaaq isku xira batteriga ayaa, dib ugu soo laabto oo dhan u tabaaxay, ku soo lifaaq xirayaasha shaashada, iyo xir barnaamijka AqoonMaal, oo ay reinstalling laba boolal soo dhaafay yaalla meel u dhow dekedda hillaac.
Qaybta 2. Sida loo bedelo iPhone 5S / iPhone 5c / iPhone 5 batari
Hayso qalab yar qaado caag pry, sucker yar, shan dhibcood kaashawiito pentalobe, iyo strips xabag diyaar hor inta aadan bilaabin howlgalka. Hubi in aad iska badasho off telefoonka hor inta aanad bilaabin furaan.
Marka hore, ka fur labada boolal ku yaalla afhayeenka dhow.
Markaas, meel sucker yar shaashadda, button guriga kor ku xusan. Qabo kiiska telefoonka ee, iyo jiid shaashada la sucker si tartiib ah.
Hubi in aadan ka qayb shaashadda telefoonka ee kor ka badan 90 darajo.
Ka sokow batteriga, waxaad arki lahayd ay isku xira. Tirtireyso laba boolal iyo si tartiib ah u soo saarto isku xira ah iyadoo la kaashanayo qaado caag yar.
Waxaad arki lahaa darafta caag ah ee soo socota si ay u batteriga. Darafta tani si tartiib ah jiid si aad u hesho batteriga ka baxay kiiska. Ugu dambeyntii, badasho batariyada, iyo lifaaq ay isku xira dib. Ku rid boolal kuwa meel, iyo u diyaar in ay mar kale isticmaali aad iPhone!
Qaybta 3. Sida loo bedelo iPhone 4s iyo iPhone 4 ee batari
IPhone 4s 4 iyo daydo leeyihiin baytariyada kala duwan, laakiin habka bedelka waa isku mid. Waxaad u baahan tahay set isku mid ah qalabka, qalab yar oo caag ah pry qaado, shan dhibcood kaashawiito pentalobe, iyo Philips # 000 darawal fur.
Ka qaad laba boolal oo ku yaal meel u dhow xira dekedda ah.
Markaas, riixdo guddi danbe ee telefoonka ugu sarreysa, wayna dhaqaaqi doona.
Fur telefoonka, tirtireyso fur la xiriira isku xira batteriga, oo si tartiib ah uga saarto isku xira batteriga. IPhone 4 ayaa hal fur, laakiin iPhone 4 S leeyahay laba boolal ku xira ah.
Isticmaal furitaanka qalab caag ah oo aad batteriga ka saar. Waxaa si tartiib ah saar, oo waxay ku bedelaan mid ka mid cusub!
Qaybta 4. Sida loo bedelo iPhone 3GS batari
Diyaarso qalabka sida warqad clip, koob nuugid, Philips # 000 darawal fur, shan dhibcood kaashawiito pentalobe, iyo furitaanka qalab caag ah (spudger).
Tallaabada ugu horreysa waa in meesha laga saaro kaadhka sim ka dibna u wareejin laba boolal ku yaal ee soo socota si ay u xirto isku xira.
Isticmaal koob nuugid si tartiib jiid shaashadda, markaas, u isticmaalaan furitaanka qalab caag ah si meesha looga saaro fiilooyinka in lifaaq bandhigay guddiga.
Hadda, qaybta ugu adag, iPhone 3GS ee batari waxa uu ku yaalaa hoos guddiga macquulka ah. Sidaas, waxaad u baahan tahay in la furo boolal yar, oo ka saari fiilooyinka yar oo ku xiran in guddiga la xirayaasha.
Waxaad u baahan tahay in ay kor u camera ka soo guryaha, iyo si tartiib ah u gees u guuraan. Xusuusnow, camera ku soo ma soo baxay; waxaa weli ku lifaaqan koraan, si aad kaliya gees u guuri kartaa.
Markaas, ka saar guddiga macquulka ah, oo si tartiib ah batteriga iyadoo la kaashanayo qalab caag ka saar. Ugu dambeyntii, badasho batariyada iyo telefoonka dib shirin!
Dhibaatooyinka Goobta Iphone Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo dayactir
Muxuu iPhone 6 iyo bulaacadaha batari iPhone 6 lagu daray si degdeg ah? Sidee inaan ku saxno?
Sida loo Waraaqda Photos ka kaabta iPhone in Wondows / Mac OS X
> Resource > iPhone > Sida loo badalo Battery ah iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4